काठमाडौँ । कोनकोर्ड रिटायर्ड भएको लगभग दुई दशक पछि यात्रु उडान गर्नसक्ने सुपरसोनिक विमान फेरी संचालनमा आउने भएको छ । गत सोमबार यस उत्साहको एक झलक देखिएको छ, जब विमान निर्माता बम्बार्डियरले आफ्नो नयाँ व्यापारीक जेटको सुरुवात गर्दै यसको उच्च गति बारे जानकारी दियो ।
क्यानाडाली कम्पनीले बन्ने क्रममा रहेको ग्लोबल ८००० 'विश्वको सबभन्दा छिटो र लामो दूरीको उद्देश्यले निर्मित व्यापारिक जेट' हुने बताएको छ ।
१९ यात्रु सम्मको क्षमता, ८,००० समुद्री माइल (१४,८०० किलोमिटर) को दायरा र म्याच ०.९४ को उच्च गतिको साथ, आगामी विमान २०२५ मा सेवामा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको बम्बार्डियरले उल्लेख गरेको छ ।
ग्लोबल ७५०० परीक्षण सवारी साधनले गत मे मा प्रदर्शन उडानको क्रममा ध्वनि अवरोध तोडेको थियो, म्याच १. ०१५ भन्दा बढी गति हासिल गरेपछि यो समाचार बाहिर आएको हो ।
बम्बार्डियरले यो विमान, नासा एफ/ए-१८ चेस प्लेनको साथमा, उडानको परिणाम स्वरूप दिगो उड्डयन इन्धनको साथ सुपरसोनिक उडान गर्ने पहिलो यातायात श्रेणीको विमान हुने बताएको छ ।
विमान निर्माता कम्पनि बम्बार्डियरले भनेको छ- 'ग्लोबल ८००० एयरक्राफ्टले ग्लोबल ७५०० विमानको उत्कृष्ट विशेषताहरूको लाभ उठाउँछ, हाम्रा ग्राहकहरूलाई नयाँ युगको फ्ल्यागशिप विमान प्रदान गर्दछ ।
ग्लोबल ८००० को लागि उडान परीक्षण ग्लोबल ७५०० उडान-परीक्षण वाहनहरूमा पहिले नै सुरु भइसकेको छ । बम्बार्डियरका अनुसार आगामी विमानमा २,९०० फिट बराबरको क्याबिन उचाइ हुनेछ ।
कोनकोर्ड रिटायर्ड भएको दुई दशकभन्दा बढी समयपछि यात्रुवाहक विमानको गति बढाउने असंख्य प्रयासहरूमध्ये ग्लोबल ८००० एउटा मात्र हो ।
गत वर्ष, युनाइटेड एयरलाइन्सले १५ सुपरसोनिक जेट किन्न सम्झौता गरेपछि २०२९ मा सुपरसोनिक रुटहरू उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
यसैबीच, कोलोराडोमा आधारित बूम सुपरसोनिकले ६५ र ८८ मानिसहरूको बीचमा सिट गर्न डिजाइन गरिएको ओभरचर जेटको लागि प्रोटोटाइप विमान एक्स-बि१ मा ग्राउन्ड परीक्षण पूरा गरिरहेको छ, जसले ५०० भन्दा बढी मुख्यतया ट्रान्ससेनिक मार्गहरूमा उडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको गति म्याच २.२ हुने बताइएको छ ।
दुर्भाग्यवश, फ्लोरिडा-आधारित उड्डयन स्टार्टअप एरियन गत वर्ष एरिओन एएस३ नामको म्याच ४+ कमर्शियल एयरलाइनरको लागि योजनाहरू घोषणा गरेपनि यो भने शूरु हुन सकेन ।
काठमाडौँ । वृद्धवृद्धाहरुमा डिमेन्सिया (भुल्ने रोग) महामारीको रुपमा फैलिरहेको छ । अल्जाइमर रोगको उपचारका लागि क्रेनजुमाबजस्ता औषधि प्रभावकारी नभएको देखिएपछि चिकित्सकहरूको चुनौती बढेको छ । युनिभर्सिटी कलेज अफ लन्डनका मनोचिकित्सक तथा
युगान्डाकी मरियम: १२ बर्षको उमेरमा विवाह, ४० बर्षमा ४४ बच्चा !
काठमाडौँ । अफ्रिकाको युगान्डाबाट डरलाग्दो खबर बाहिर आएको छ । यहाँ एक महिलाले ४० वर्षको उमेरमा ४४ सन्तानलाई जन्म दिएकी छन् । चिकित्सकका अनुसार बच्चा नजन्माएमा उनको स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने
किन घट्यो अर्बपतिहरुको सम्पति ?
काठमाडौँ । कोरोना अवधिपछि आएको मन्दीले सबैलाई असर गरेको छ । विश्वका धनी एलन मस्कको सम्पत्ति करिब ६२ अर्ब डलरले घटेको छ भने जेफ बेजोसको सम्पत्ति करिब ६३ अर्ब डलरले
गलेश्वर । बर्खाको समय । अनकन्टार भिर र जङ्गलको बाटो हुँदै ६०० बढी भेडाका बथान चरनका लागि म्याग्दीको धौलागिरि गाउँपालिकामा पर्ने धौलागिरि हिमालको आधार शिविर क्षेत्रमा पुगेका छन् । म्याग्दीको धौलागिरि